ငွေစန္ဒာ: July 2012
နှစ်လည် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ၄.၇.၂၀၁၂ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော 'ငွေစန္ဒာ (သို့မဟုတ်) စက္ကန့်တိုင်းကို စိန်စီသွားသူ' ဆောင်းပါးကို မေတ္တာဖြင့် တုန့်ပြန်ကြ သော ဘ လော့ဂါ မောင်နှမများကို အထူးကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း ပြောပါရ စေ။
၄.၇.၂၀၁၂ ရက်ဟာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖြစ်လို့ နှစ်လည် အလှူပွဲ ကို တနင်္ဂငွေနေ့ဖြစ်တဲ့ ၈.၇၂၀၁၂ ရက်မှာပြုလုပ်ဖို့ ကြံစည်ခဲ့ပါတယ်။
သမီးငယ် ကျောင်းဆက်တက် ရန် အစ်ကိုများရှိရာ ပင် လယ် ရပ်ခြားသို့ထွက်ခွာအပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ နယ်မြို့သို့ ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲပြောင်းရွှေ့နေထိုင် ခဲ့ပါတယ်။ အခုနေတဲ့အိမ်က သိပ်မကျယ်ပါ။ ဒီမြို့မှာနေတဲ့ မြန်မာ ဆိုလို့ ကျွန်တော် တစ်ဦးတည်းသာရှိတဲ့အတွက် နှစ်လည် အလှူပွဲ ကိုအိမ်မှာ ပြုလုပ်ဖို့ အဆင် မ ပြေပါ။
ယမန်နှစ်က မိမိတို့နေထိုင် ခဲ့ရာ ဒုတိယမြို့တော်က နေ ၃နာရီခွဲခန့်အကြာ ကားမောင်းသွားရတဲ့ ကင်စတန်မြို့တော်သို့ မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေ တချို့သွားရောက်ပြီး ဓမ္မဒီပဝိဟာရ ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကို လလည်ဆွမ်းကျွေး စဉ်အခါကလည်း ကင်စတန်မှာရှိတဲ့ မြန်မာမိသားစုများကို ကျောင်းသို့ မဖိတ်ကြားနိူင် ခဲ့ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နောက်တစ် ရက် နေအိမ်မှာ လလည်ဆွမ်းကပ်ဘုရားရှိခိုး၊ ရေစက်ချအမျှဝေပွဲ နဲ့ ငွေစန္ဒာရဲ့ အရိုးပြာကို ပင် လယ်ပြင် သို့ သွားရောက်ကြဲပက်မယ့် အခမ်းအနားကျင်းပဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် နှစ်လည်ဆွမ်းကပ်ဘုရားရှိခိုး၊ ရေစက်ချအမျှဝေပွဲ အခမ်းအနားကို ကင်စတန်မြို့တော်ရှိ ဓမ္မဒီပဝိဟာရ ကျောင်းတိုက်မှာ ကျင်းပရန် ကင်စတန်မြို့နေ မိတ်ဆွေများနဲ့ တိုင် ပင်ပြီး စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနိုင် ငံတစ်နံ၊ တစ်လျှားမှာရှိတဲ့ မြန်မာမိသားစုအားလုံးကို အီးမေး(လ်)နဲ့ရော၊ နံပါတ်သိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကို ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ရော မေတ္တာရှေ့ထား၍ ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။
နှစ်လည် အလှူပွဲ ကျင်းပရာ ဓမ္မဒီပဝိဟာရ ကျောင်းတိုက် ရဲ့ သိမ်တော်ကြီးသို့ မျှော်လင့်တာထက်ပိုပြီး ရပ်ဝေး၊ ရပ်နီးမှ မြန်မာမိသားစုအများအပြား တက်ရောက်ကြတဲ့အတွက် အထူးတလည် ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ ဖြစ် ရပါတယ်။
အလှူပွဲ နေ့နံနက်ပိုင်းမှာ သိမ်တော်ကြီးအတွင်း သီတင်းသုံးတဲ့ မြတ်စွာဘုရားထံတွင် နှစ်လည်ဆွမ်း၊ ခဲဘွယ် ဘောဇဉ် ချိုချဉ် ရသာတို့ကို ငွေစန္ဒာအား ရည်စူး၍ ကျွန်တော်က ဆက်ကပ် လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ မေတ္တာထား၍ ကြွရောက်လာကြတဲ့ မြန်မာမိသားစုများကို မြန်မာမုန့်ဟင်းခါး၊ သစ်သီးများ၊ အချိုရည်များ၊ ရွှေရင်အေး၊ ရွှေဖရုံသီးနနွင်းမကင်း၊ သီးစုံဖျော်ရည်တို့နဲ့ ဧည့်ခံခဲ့ပါတယ်။
မွန်းလွဲချိန်မှာ ဘုရားရှိခိုး၊ ရေစက်ချအမျှဝေပွဲ အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အစီအစဉ်အရ ရှေးဦးစွာ နမောတဿ (၃) ကြိမ်ရွတ်၍ အခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် မိတ်ဆွေဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးက နှစ်လည် အလှူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှာစကား ချီးမြှင့်ပါတယ်။ ဆက်လက်၍ ငါးပါးသီလခံယူဆောက်တည်ခြင်း၊ သံဝေဂဂါထာများ ရွတ်ပွားပူဇော်ခြင်း၊ မြတ်စွာဘုရားကို သောက်တော်ရေချမ်း၊ ပန်း၊ ဆီမီး ဖ ယောင်းတိုင်နှင့် အ မွှေးနံ့သာတိုင် တို့ဖြင့် လှူဒါန်း ဆက်ကပ် ပူဇော်ခြင်း၊ ပရိတ် ပဋ္ဌာန်း ရွတ်ဖတ်ခြင်း၊ သံဝေဂဉာဏ်ပွားများ၍ ကမ္မဋ္ဌာန်း ဘာဝနာရှုမှတ်ခြင်း၊ မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းခြင်းး၊ ရေစက်ချအမျှဝေခြင်းစတဲ့ အလှူဒါန ကောင်းမှု ကုသိုလ်များကို ငွေစန္ဒာအား ရည်စူး၍ မိတ်ဆွေများနှင့် အတူတကွ ညီညာဖျဖျ အောင်အောင် မြင်မြင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
နှစ်လည် အလှူပွဲ အတွက် လိုလေ သေးမရှိအောင် စိတ်ရော၊ ကိုယ်ပါ စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊ လိုအပ်သည်များကို အားတက် သ ရောပါဝင် ကူညီခြင်း၊ အလှူပွဲသို့ တခဲနက် ကြွရောက်ကြပြီး ငွေစန္ဒာအား ရည်စူး၍ ငွေစန္ဒာမိသားစုနှင့် အတူ အလှူဒါနပြုခြင်း၊ သီလ ဆောက်တည်ခြင်း၊ ဘာဝနာပွားခြင်းစတဲ့ ကုသိုလ် ကောင်းမှုများပြုလုပ်၍ ငွေစန္ဒာနှင့်တကွ ၃၁ ဘုံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ သုခိတ၊ ဒုက္ခိတ ဝနေယျသတ္တဝါ အ ပေါင်းတို့အား အမျှပေးဝေကြခြင်းများအတွက် မြန်မာမိသားစုများကို အထူးတလည် ကျေးဇူးတင် ရပါတယ်။ ။
Posted by ငွေစန္ဒာ at 7:01 PM6comments:
ငွေစန္ဒာ (သို့မဟုတ်) စက္ကန့်တိုင်းကို စိန်စီသွားသူ
(ငွေစန္ဒာ ဘဝတစ်ပါးသို့ ပြောင်းသွားသည်မှာ ၄ .၇.၂၀၁၂ ရက်တွင် တစ်နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ငွေစန္ဒာအတွက် ဂုဏ်ပြုဆောင်းပါးကိုဖော်ပြလိုက်ပါသည်။)
ငွေစန္ဒာ အ ကြောင်းကိုစိတ်ထဲမှာရေးမိနေတာကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့အားဖြင့် တော်တော်နဲ့မ ရေးဖြစ်ခဲ့ပါ။ 'ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖော်၊ မသူတော်' ဖြစ်မှာစိုး၍ ရေးရမှာလက်တွန့်နေခဲ့ပါတယ်။ မည်သို့ဆိုစေ တစ်နှစ်ပြည့်အစီအစဉ်အဖြစ် ငွေစန္ဒာကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ငွေစန္ဒာကိုယ်တိုင် ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ နိုဝင် ဘာလ၊ ၁၉ - ရက်နေ့က ရေးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ 'သူမနဲ့ကင် ဆာရောဂါ' ဆောင်းပါးအဆက်လို့လဲပြောလို့ရပါတယ်။ ငွေစန္ဒာရဲ့ ဆောင်းပါးထဲမှာတင်ပြထားသလို သူမဟာ ဝီပဿနာတရားကိုတတ်နိုင် သ ရွေ့ပွားများခဲ့ပါတော့တယ်။ ထိုသို့ စတင် ပွားများမှုမပြုခင် တရားကိုဘယ်လိုမှတ် ရမလဲလို့ ခင် ပွန်းဖြစ်သူ ကျွန်တော့်ကိုမေးပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ မိုးကုတ်ဝိပဿနာ တရားတွေကို နာကြားခဲ့ ၊ အချိန်ပိုင်းတရားထိုင် ခဲ့တဲ့အ တွေ့အကြုံ ၊ မြန်မာပြည်မှာ နေခဲ့စဉ်က ရိပ်သာ နှစ်ခုမှာ ရက်ပိုင်းဝင်ပြီး တရားအားထုတ်ခဲ့တဲ့အ တွေ့အကြုံကိုအ ခြေခံပြီး ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံရရင် ကျွန်တော်ကစာတွေ့ကိုအ ခြေခံပြီး ရှင်းပြခဲ့တာပါ။
ငွေစန္ဒာရေးသားခဲ့သလို သူမဟာအွန်လိုင်းက နေ ဆရာတော်ပေါင်းစုံရဲ့ ဝိပဿနာတရားတော်တွေကို နာယူပါတယ်။ ဆရာတော်တွေရဲ့ ဝိပဿနာတရားစာအုပ်တွေကိုလဲဖတ်တယ်။ သူမဟာ ဘုရားစင်ရှေ့မှာထိုင်ပြီး တရားမမှတ်နိူင် ရှာဘူး။ လျောင်း၊ ထိုင်၊ ရပ်၊ သွား ဆိုတဲ့ အဆင်ပြေတဲ့နည်းနဲ့ဘဲ တရားရှုမှတ်တယ်။ ဆက်တီခုံမှာထိုင် ရင်းရှုမှတ်တာများတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ မိုးကုတ်ဆရာတော် ဦးဃောသိတရဲ့ ဝိပဿနာ တရားတွေကို အဖန်တလဲလဲ ကြားနာရင်း မိုးကုတ်ဝိပဿနာ နည်းနဲ့ တရားရှုမှတ်ပါတယ်။
ညစာ စားချိန်မှာ သူမရဲ့တရားရှုမှတ်တဲ့အ တွေ့အကြုံတွေကို ကျွန်တော့်ကိုရှင်းပြတယ်။ 'ကာလေန ၊ ဓမ္မသာကစ္ဆ္ဆာ' ဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီ တရားဆွေးနွေးဖြစ်တယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အစပိုင်းမှာ ကျွန်တော်က ဆရာ ယောင်ယောင် လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်ကတပည့်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်က စာတွေ့အရ အသိများသလို ရှိခဲ့ပေမယ့် လက်တွေ့ကျင့်ကြံ အားထုတ်မှုအပိုင်းမှာ သူမကများစွာသာလွန်ပြီးအ တော်အတန် ခရီးပေါက်ခဲ့တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
သာဓကအားဖြင့် ငွေစန္ဒာတင်ပြခဲ့သလို ပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့ ကီမိုရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ် တစ်ကိုယ်လုံး အထူးသဖြင့် အဆစ်တွေ အလွန်နာပါတယ်။ယုတ်စွအဆုံး လျှာနဲ့သွားတွေတောင် နာပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ သူမအတွက် အားပြင်းတဲ့ မော်ဖိန်းလို အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးနဲ့အတူ အခြား အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေး ၊ ထိုးဆေးမျိုးစုံဆောင် ထားပါတယ်။ ပထမပိုင်း ကီမိုသွင်းခါစမှာတော့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးထိုးပေးရတာတို့ ၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး သောက်စေတာတို့လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိပ်မကြာခင် မှာ ငွေစန္ဒာဟာ ဘာ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးကိုမှ အထိုးမခံတော့ပါဘူး။ ဘယ်အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးကိုမှလဲမ သောက်တော့ပါဘူး။ သူမဟာ ရုပ်တရားနဲ့ နာမ်တရားကို ဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားသိမြင်ပြီး ဝေဒနာရဲ့အပျက်ကို ရှုမှတ်ခြင်းအားဖြင့် အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေး အလုံးစုံကိုပယ်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ Cervical Spondylosis ဆိုတဲ့လည်ပင်းနာရောဂါရှိတော့ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးမကြာ၊ မကြာသောက် ရတယ်။ တစ်ခါက ဆေးသောက်ပါလျက်နဲ့ မခံရပ်နိူင်အောင် လည်ပင်းနာလာတော့ ဇနီးသည်က ကျွန်တော့်ကို ဘုရားစင်ရှေ့မှာထိုင် ခိုင်းပြီး သူမ ပြောတဲ့ နည်းအတိုင်း ရှုမှတ်ခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ဒီတော့မှ ရုပ်နဲ့နာမ်ကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင် ခဲ့ပါတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲ လည်ပင်းနာတဲ့ ဝေဒနာဟာယူပစ်သလို ပျောက်သွားပါတယ်။ နောက်ပိုင်းလဲ လည်ပင်းနာတာ သိပ်မခံစားရ တော့ပါ။ လည်ပင်းကိုထိန်းတဲ့ collar လည်းမတတ် ရ တော့ပါ။ ဒီအကျိုးတရားအတွက် ဇနီးကို အထူးကျေးဇူးတင် မိပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဂုဏ်တော်အတိုင်း လက်တွေ့ ဒိဋ္ဌချက် ခြင်းအကျိုးပေးပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ ကင် ဆာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ ကုသမှု အစီအစဉ်အရ တစ်နှစ်အတွင်းမှာ ကီမိုအမျိုးအစား တစ်မျိုးကို ခြောက်ကြိမ်စီနဲ့ သုံးမျိုး ဆယ့်ရှစ်ကြိမ် သွင်းပြီး မာကျောတဲ့ သူမရဲ့စိတ်ဓာတ်၊ ဝိပဿနာတရားပွားများအားထုတ်မှုရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့် အဆုတ်နဲ့အသည်းမှာတင် မက ကျောရိုးမှာပါကင်ဆာနဲ့ ပတ်သက်လို့ဘာမှမ တွေ့ရ တော့ပါ။ ကျွန်တော်နဲ့မိသားစု၊ နှစ်ဘက်ဆွေမျိုးများ၊ သူမကိုကုသ ပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်တွေနဲ့ မိတ်ဆွေတွေအားလုံး အံ့ဩဝမ်းသာကြတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ကင် ဆာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ ပုံမှန်ပြ၊ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုတွေ ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
လအနည်းငယ်အကြာ စီတီစကင်(န်) အဖြေအရ အဆုတ်နဲ့ ကျောရိုးမှာကင် ဆာဆဲ(လ်) ပြန်လည် ပြန့်နကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာသိခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေ ဆရာဝန်များကလည်း သူမကို အားပေးကြပါတယ်။ နိုင် ငံရပ်ခြား မှာဆိုတော့ ဆွေမျိုးတွေနဲ့ဝေးနေ ပေမယ့် ဒီမှာရှိတဲ့ မြန်မာမိသားစုများက သူမရဲ့ သူမတူတဲ့ စေတနာ ကောင်းမှုကြောင့်လည်း ဆွေမျိုးရင်းချာပမာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ အားပေးကူညီကြလို့ အထူးကျေးဇူးတင် ရပါတယ်။ ကာယကံရှင် ငွေစန္ဒာ ကိုယ်တိုင် ကလည်း စိတ်ဓာတ်လုံးဝမကျဘဲ ကြံ့ကြံ့ခံပြီး ဆက်လက် ဆေးကုသမှုခံယူဘို့ပြင် ဆင် ထားပါတယ်။
ဒါနဲ့ကျောရိုးကို ဓာတ်ရောင်ခြည်နဲ့ ဆယ်ကြိမ်ကုသမှုကို ခံယူခဲ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ကီမိုအမျိုးအစား နောက်ထပ် တစ်မျိုးနဲ့ သုံးကြိမ်ဆေးသွင်းကုသမှုကို ခံယူခဲ့ရပါတယ်။ စုစုပေါင်း ကီမိုအမျိုးအစား လေးမျိုးကို နှစ်ဆယ့်တစ်ကြိမ် သွင်းခဲ့ရတာပါ။
ဒီလိုကြံ့ကြံ့ခံ ဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ ကြားထဲကဘဲ မခံမရပ်နိူင်အောင် ခေါင်းတွေထိုးကိုက်ပြီး အော့အန်လာလို့ ဦးနှောက်ကို စီတီစကင်(န်) ရိုက်ကြည့်တော့ ဦးနှောက်ကိုပါ ကင် ဆာဆဲလ်တွေ ပြန့်နကြောင်း ပို၍ဝမ်းနည်းဖွယ် ရာသိခဲ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဦးနှောက်ကို ဓာတ်ရောင်ခြည်နဲ့ ဆယ်ကြိမ်ကုသမှုကို ဆက်လက်ခံယူခဲ့ပါတယ်။
ငွေစန္ဒာဟာဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ကင် ဆာရောဂါခံစားခဲ့ရ ပေမယ့် လူနာလိုမ နေခဲ့ပါ။ မိသားစုကို ဒုက္ခမ ပေးပါ။ တတ်နိူင် သ ရွေ့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီးတော့သာနေခဲ့ပါတယ်။ ကင် ဆာရောဂါ နောက်ဆုံးအဆင့် ရောက်လို့ ကိုယ်တိုင် လမ်းမ လျှောက်နိုင် မှဘဲ သူတစ်ပါးအကူအညီကို ယူခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို ဝေဒနာပြင်းထန်စွာ ခံစားနေရ ပေမယ့် ငွေစန္ဒာရဲ့ မျက်နှာဟာဝေဒနာ ခံစားရတဲ့ အရိပ်အ ယောင် တစိုးတစိမျှ မ တွေ့ရဘဲ တကယ့်ကို ကြည်လင် ဝင်းပ နေတာကို ထူးထူးခြားခြား တွေ့ရပါတယ်။ ဒီအ ကြောင်းကို မြန်မာပြည်က သူမရဲ့ ဖခင် နဲ့ ညီအစ် မ တွေကို ဖုန်းဆက် ရင်းပြောတော့ သူမက ဒီလိုမ ပြောဘို့တားမြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ မျက်နှာလေးဟာ ကြည်ကြည် င်လလင် ရွှင်ရွှင် ပျပျဘဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့လဲ စိတ်ကြည်လင်အေးချမ်းမှု ကူးစက်ခံရပြီး စိတ်သက်သာမှုရခဲ့ပါတယ်။ ဒီနည်းအားဖြင့် ငွေစန္ဒာဟာ မိသားစုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ကိုအကျိုးပြု သွားပါတယ်။ အခုလဲ ကျွန်တော့်အ နေနဲ့ စိတ်ညစ်၊ စိတ်ရှုပ်စရာတွေ ရှိရင် ငွေစန္ဒာရဲ့ မျက်နှာ ကြည်ကြည် င်လလင် လေးကိုမြင်ယောင် လိုက်တဲ့အခါ ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်တွေလဲ ကြည်င်လ အေးချမ်း သွားရပါတယ်။
ငွေစန္ဒာရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေဟာ မိသားစုအ ပေါ် မ ဖော်ပြနိုင်လောက်အောင် များပြားပါတယ်။ ကျွန်တော့်အ နေနဲ့ ပြည့်စုံကုံလုံအောင် ဖော်ပြခြင်းငှါမစွမ်းပါ။
မိတ်ဆွေ ဆရာဝန်တစ်ဦးနဲ့ သင်္ကြန်ပွဲမှာ ဆုံတုန်းကလည်း ' ဆရာ့ကို ခုမှပြောဖြစ်တာ၊ ဆရာ့ဇနီးဆုံးတုန်းက မျက်နှာလေးက ပြုံးနေတာတွေ့ရတယ်။ ဘဝကူး ကောင်းမှာ သေချာတယ်။ ' လို့ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း သူကောက်ချက်ချတာကိုလက်ခံပါတယ်။
ဇနီးသည်ဟာ ဘဝတစ်ပါးသို့ ရောက်ရှိနေ ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ကို စိတ်ကြည်လင် အေးချမ်းမှု ပေးနေခြင်းအားဖြင့် အကျိုးပြုနေပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း ဇနီးသည်ကို ကျေးဇူးအခါခါတင် မိပါတယ်။
ငွေစန္ဒာဟာ ရောဂါ ပြင်းထန်စွာ ခံစားခဲ့ရပေမယ့် အချိန်မဖြုန်းဘဲ စက္ကန့်တိုင်း စက္ကန့်တိုင်းကို တန်ဘိုးရှိတဲ့ စိန်တွေစီသွားသည့် အလား မပြတ်သော တရားအမှတ်နဲ့ သတိကပ် ရင်း ဝေဒနာကိုခွာကာ အပျက်ကို မြင်အောင်ရှုနိုင် ခဲ့တဲ့အတွက် အထူးတလည် မျက်နှာကြည်င်လ ဝင်းပစွာနဲ့ ဘဝတစ်ပါးသို့ ပြောင်းသွားနိုင် ခဲ့တယ်ဆိုတာ လုံးဝ ယုံကြည် ပါတယ်။
တကယ်တော့ ငွေစန္ဒာဟာ စက္ကန့်တိုင်းကို တန်ဘိုးရှိစွာ စိန်စီသွားနိုင် သူဖြစ်ပါတယ်။
၄. ဇူလိုင်. ၂၀၁၂ ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
Posted by ငွေစန္ဒာ at 12:33 AM 17 comments:
Cutlet with garlic-chilli crumb
Pattaya ကမ်းခြေသို့ အလည်တစ်ခေါက်